Introducing EDUCATION Discount ~ The ICT.com.mm Blog
Introducing EDUCATION Discount
K10,000 cash back on any order (including discounted items) over K300,000. Terms: Must represent student ID to delivery personnel. If correct, ICT.com.mm will give K10,000 in cash right away. Plus, FREE delivery too.
ကျပ်ငွေ ၃ သိန်း (စျေးလျော့ပြီးသား ပစ္စည်းများပါ အပါအဝင်) နှင့် အထက် ဝယ်ယူသည့် အော်ဒါတိုင်းအတွက် ကျပ်ငွေ ၁ သောင်း ပြန်အမ်းသည့် အစီအစဥ် ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ရည်ရွယ်သည့်အတွက်ကြောင့် လာရောက်ပို့ပေးသည့်အခါ ကျောင်းသားကဒ်ကို ပြသရမည်။ မှန်ကန်မှု ရှိပါက ကျပ်ငွေ ၁ သောင်းကို ချက်ချင်းပြန်အမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
Newer ICT.com.mmရဲ့ နွေဦးအကြို Clearance Sale စတင်ပါပြီ။
Older Up to 20% လျော့ထားတဲ့ အလန်းစား AOC monitor